Atụmatụ 8 iji chọta ụlọ nkwari akụ zuru oke | Akụkọ Njem
Abịa na njem, enwere ndị mmadụ chọrọ ịnọ na họtel. Ndị ọzọ na-ahọrọ ịnọ na họtel na ala ịta ahịhịa nke nnukwu obodo, ebe ha nwere ike izu ike karị. Fọdụ ga-ahọrọ nnukwu ọnụ ụlọ ebe ndị ọzọ ga-enwe oghere ọirụ ebe ha na onye òtù ọlụlụ ha nwere mmekọrịta chiri anya karị. Ya mere, anyị nwere ike ịchọta njikọ dị iche iche nke ọtụtụ mgbanwe nyere.
Dịka ọmụmaatụ, mmetụta nke inwe mmetụta nke ịnọ n'ụlọ na njem dị anya, ụlọ oriri na nkwari akụ dị nso na ebe ndị njem nleta niile, na-ebute izu ike na nkasi obi ụzọ ma ọ bụ nwee obere ego iji debe ọnụ ụlọ.
Mgbe ụfọdụ, ịchọta ụlọ nkwari akụ dịka mkpa anyị nwere ike isi sie ike nyere nnukwu onyinye dị adị. Yabụ, na ọkwa na-esonụ, anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ iji chọta ezigbo ụlọ nkwari akụ.
1 Dị njem
2 Kpebie na klas ebe obibi
3 Gbakọọ mmefu ego
4 Dịkwuo akụrụngwa
5 Nri n'oge njem
6 Lelee echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ
7 Akwụkwọ tupu oge eruo
8 Ugwu nke ika
Mgbe ịmalite njem ma ọ bụ ezumike anyị ga-edo anya banyere ihe anyị na-achọ n'aka ya. Ọ bụ njem azụmahịa ka ọ bụ njem ọdịbendị ka anyị ga-aga naanị anyị, dị ka di na nwunye ka ọ bụ anyị na ụmụaka, ànyị na-achọ ụlọ oriri na ọ hotelụ themụ ma ọ bụ nke okomoko?
Ugbu a, nkwari akụ nkwari akụ dị iche iche nke na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ ọ bụla dabara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị na-achọ ụlọ oriri na ọ inụ aụ na Lisbon, anyị nwere ike ịhọrọ ebe etiti ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ihe ncheta ndị ahụ, mana anyị ga-aga na mpụga ma ọ bụrụ na anyị na-achọ izu ike, mana na ebe dị anya site na obodo ahụ.
Kpebie na klas ebe obibi
Tupu, naanị nhọrọ ị ga-eme bụ ịga n'ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ mbikọ. Ugbu a, enwere ọtụtụ ụzọ dịgasị iche iche ma ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ụlọ ezumike, ụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ime obodo, gọọmenti rụrụ, B & Bs ma ọ bụ gọọmenti rụrụ. Typedị ebe obibi ọ bụla na-enye ọrụ dị iche iche emegharị maka mmefu ego na mkpa anyị.
Gbakọọ mmefu ego
Ọ bụ ezie na anyị niile ga-ahụ n'anya ịnọ na Burj Al Arab na Dubai, ya na kpakpando 7 ya na-enwu gbaa, ọ bụ okomoko nke nwere obere ego. Ya mere, mgbe ị na-eme atụmatụ njem ị ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ma mara mmefu ego anyị nwere na ego ole a ga-ekenye anyị.
Ozugbo ị kọwasịrị ihe ịchọrọ imefu, ị nwere ike wepu na nchọta ụlọ ndị ahụ dị oke ọnụ yana kwa ndị dị ọnụ ala nke na-adịghị akpali obi ike.
Ozugbo anyi matara udiri ulo nke anyi choro ihi abali rue oge njem a, ugbua anyi aghaghi ilele uru nke ulo oru obula di.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ izu ike mgbe anyị nwesịrị nsogbu azụmahịa, ikekwe anyị chọrọ ka ọ nwee spa na mgbatị ahụ. Ọ bụrụ na gị na ụmụaka na-eme njem, a ga-atụkwasị ime ụlọ egwuregwu.
Nri n'oge njem
Enwere ndị na-ahọrọ ịpụ iri nri ma mata gastronomy nke ebe ahụ n'oge ezumike ha. Ndị ọzọ na-ahọrọ iri nri n’ụlọ nri nke họtel ndị ahụ n’onwe ha iji zere njem ndị na-adịghị mkpa na iji eziokwu ahụ bụ́ na ọtụtụ na-eme nlezianya anya karị na iri nri sara mbara karị. N'ezie, ọ bụghịzi ihe ijuanya ịhụ onye isi nri a ma ama na-arụkọ ọrụ na ha.
Lelee echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ
Anyị amatala ebe anyị chọrọ ịnọ, ego ole anyị chọrọ imefu, ọrụ ndị anyị na-achọ na ọ bụrụ na anyị chọrọ iri nri na họtel ahụ, mana anyị amabeghị nke anyị ga-ahọrọ. N'okwu ahụ, ọ nwere ike inye aka ịgụ echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị pụrụ iche ma dabere na sistemụ akara kpakpando nke otu mba.
Foto | Họtelu CR7
Akwụkwọ tupu oge eruo
Ọ bụrụ na ihe omume a na-atụghị anya ya mee tupu ụbọchị njem nke ị na-enweghị ike ịme ma ọ bụ na anyị achọta onyinye ka mma ma anyị chọrọ ịgbanwe ụlọ nkwari akụ, anyị kwesịrị ị paya ntị na iwu ịkagbu ụlọ nkwari akụ ahụ. N'ọtụtụ oge, ọ bụ n'efu ma ọ bụrụhaala na echedoro ndoputa ahụ na oke oge, oge na-adịkarị n'etiti 24 na 48 awa.
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike iji ohere a debanye ụlọ nkwari akụ na ọnụahịa dị ịtụnanya izu tupu oge eruo yana obi iru ala nke ịmara na enwere ike ịkagbu ndoputa ahụ ma ọ bụrụ na njem ahụ emeghị na njedebe.
Ugwu nke ika
Enwere ụfọdụ agbụ ụlọ nkwari akụ nke wuru aha ha n'akụkọ ihe mere eme ha. Maka nke a, itinye akwụkwọ na otu ụlọ oriri na nkwari akụ gị nwere ike ịkpalitekwu ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » Atụmatụ 8 iji chọta ụlọ nkwari akụ zuru oke